မအူပင် - ဝီကီပီးဒီးယား
မအူပင်သည် ရုဗီအေစီအီး မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်၍ ယင်းကို ရုက္ခဗေဒ အလိုအားဖြင့် ဆာကိုဆီဖားလပ်ကောဒေးတပ်(Sarcocephalus cordatus = Nauclea orientalis)ဟု ခေါ်သည်။ မအူပင်မျိုး အများအပြားရှိရာ မအူ လက်တံရှည်ပင်၊ မအူကတုံးပင်၊ မအူလေလံပင်နှင့် မအူကြီးပင်တို့မှာ မအူပင်နှင့်မျိုးတူ ပင်မျိုးများ ဖြစ်ကြသည်။ မအူလက်တံပင်နှင့်ရေမအူပင်တို့သည် မအူဟုခေါ်ရသော်လည်း မအူပင်နှင့်မျိုးချင်းမတူ၊ မျိုးကွဲပင် ၂ မျိုးဖြစ်ကြသည်။ မအူပင်များသည် များသောအားဖြင့် မြေနိမ့်ပိုင်းရှိ သစ်တောများတွင် ချောင်းဘေး မြောင်းဘေးတို့၌ ပေါက်လေ့ရှိသော သစ်ပင်မျိုးဖြစ်သည်။ မအူကတုံးပင်သည် အကြီးအလွန်မြန်သော အရွယ်အလတ် စား သစ်ပင်မျိုးဖြစ်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အများအားဖြင့် စိုစွတ်သော မြေနိမ့်ပိုင်းဒေသများ၌ ပေါက်ရောက်သည်။
သစ်သားမှာ ပျော့၍ ဝါထိန်နေသည်။ အညံ့စား သေတ္တာများနှင့် အိမ်အသုံးအဆောင်များ၊ ဖိနပ်အစရှိသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရန်သင့်တော်သော အသားဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် သီဟိုဠ်နိုင်ငံတွင် အထက်ဖော်ပြပါ ဝတ္တုပစ္စည်းများကို မအူကတုံးသားဖြင့် ပြုလုပ် ကြသည်။
မအူလက်တံရှည်ပင်သည် မအူကတုံးပင်နှင့် ခပ်ဆင်ဆင်တူ ၍ အထက်နှင့် အောက်မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြေညီသစ်တောများတွင် ချောင်းဘေး မြောင်းဘေးတို့၌ ပေါက်ရောက်သော သစ်ပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်သည်။ သစ်သားမှာ ဝါကြန်ကြန်အရောင်ရှိ၍ အကြောအမျှင် ညီညာသည်။ ပျော့သောအသားဖြစ်ခြင်းကြောင့် မီးခြစ်အိမ် ပြုလုပ်ရန် အတွက် အသုံးကျသည်။ ထင်းရှူးသားကဲ့သို့ ပေါ့ပါးသဖြင့် ပစ္စည်း များထည့်ရန် သေတ္တာရိုးရိုးတို့ကိုလည် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ စက္ကူပြုလုပ်သော သစ်သားတို့တွင် မအူလက်တံရှည် သားလည်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ အိမ်ဆောက်ခြင်း၊ လှေစပ်ခြင်း၊ ထမ်းပိုးတံစသည်တို့ ပြုလုပ်ရာ၌လည်း အသုံးဝင်သည်။ ယင်းသစ်သားကို အမြန်ခြောက်သွေ့အောင် မပြုလုပ်လျှင် အပြာရောင်အစွန်းအကွက်များ ပေါ်လာတတ်သည်။ သို့သော် အသားသေအောင် ပြုလုပ်ရာ၌ ခဲယဉ်းခြင်းမရှိချေ။
မအူလက်တံရှည်ခေါက်ကို အဖျားဖြတ်ဆေးအဖြစ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ အရွက်ကို အာခလောက်ရန် ဆေးရည်စပ်ရာ၌လည်းကောင်း အသုံးပြုကြသည်။ မအူလက်တံပင်များကို အထက်မြန်မာနိုင်ငံ ကျောက်တွင်း ဒေသဖြစ်သော မိုးကုတ်နယ်၌ တွေ့ရ၍ ရှမ်းဘာသာဖြင့် မဲ့·ခ· ရောင်း ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ကချင်ဘာသာဖြင့် ခါလမ် ဟူ ၍လည်းကောင်း ခေါ်ကြသည်။
ရေမအူပင်ဟူ၍ခေါ်သော သစ်ပင်ကြီးများကို မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း၌ အနှံ့အပြားတွေ့နိုင်သည်။ ကချင်ဘာသာဖြင့် ခလ· လျောင်း၊ သို့မဟုတ် လ·လျောင်း ဟု ခေါ်တွင်လေသည်။
ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသရှိ မအူပင်မြို့သည်လည်း ကောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့ ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက် တစ်ခုဖြစ်သော မအူကုန်း သည်လည်းကောင်း၊ ထိုမအူပင်တို့ ပေါက်ရောက်သည်ကို အစွဲပြု၍ မှည့်ခေါ်ကြသည့် အရပ်ဒေသများဟု ဆိုကြသည်။
↑ Govaerts, R. et al. (2019). World Checklist of Rubiaceae. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; https://wcsp.science.kew.org/namedetail.do?name_id=184868 Retrieved 25 November 2019
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မအူပင်&oldid=493644" မှ ရယူရန်
၂၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၀၀:၄၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၀၀:၄၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။